Isikhokelo Somalt Expert Ukudala i-SEO Practices ezijoliswe kumgangatho
Ii-injini zophando zikhulile kunye nexesha kwaye zazisa inani elikhulu lobuchule obusekelwe kumgangatho. Ukutshintshiselwa kwamanje kunikezele amagama angundoqo kwindawo ephambili kwi-hat yangomhlophe ye-SEO. Ukuphuculwa kwegama elingundoqo liye lahlala liyingxenye ebalulekileyo yokubeka indawo engcono kwi iinjongo zokusesha iziphumo kodwa ayinakwenzeka njengoko kwakuneminyaka embalwa edlulileyo - faretto a incasso 6128 cr.
Indima yegama elingundoqo
Akuyi kuphazamiseka ukutsho ukuba ukulungiswa kwegama elingundoqo kunokuba kubalulekile ukuhlala kwendawo kwi-intanethi. Iingxelo ezahlukileyo zibonisa ukuba i-Google kunye nezinye iinjongo zophando zinikele amagama angundoqo kubaluleke kakhulu, kodwa oko akuthethi ukuba abanikazi bewebhu kunye neeblogger kufuneka bafake amaninzi amagama angundoqo kumxholo. Kunoko, bafanele bazame ukusebenzisa umsila omfutshane kunye nemigca emide yomsila ngokufanelekileyo kwaye akufuneki ukushiya amagama angundoqo. Ngaphandle koko, iinjini zokukhangela ziza kugweba kwaye zivinjelwe iziza zazo ukuba zingabonakali kwiziphumo zazo.
Iphakamisa imibuzo enjengokuthi "Ndiyilinganisa njani ukusetyenziswa kwegama elingundoqo kunye ne-SEO?". Kufuneka ugcine engqondweni izinto ezilandelayo zichazwe ngu-Oliver King, ingcali ephezulu ye-19 (Semalt , ukwenzela ukwandisa ukusetshenziswa kwegama elingundoqo, ukuqinisekisa ukuba umgangatho womxholo wakho uhlala ngokufanayo.
Ukusetyenziswa kwegama elingundoqo
Qinisekisa ukuba amanqaku akho kunye nendlela abhaliweyo ngayo abandakanyekayo kwaye afike kwiimigangatho yokukhangela injini..Okokuqala, kufuneka uqhube uphando olusisiseko lwegama elingundoqo kunye nokwenza uluhlu lwemigaqo engundoqo ehambelana nesiza sakho. Isinyathelo esilandelayo kukuba ulungelelanise onke amagama angundoqo ukukhetha ukuba yeyiphi imichila emfutshane kunye nomsila wexesha elide elungeleyo kwi shishini lakho. Kufuneka uzame ukugcina injongo yokuphanda engqondweni yakho xa ukhetha umsila omde kunye nemigca emfutshane yomsila. Oku kubangelwa ukuba amanqaku abhalwe ngokugqithisileyo aya kuba bhetele kwii-injini zosesho kwaye ziya kufakwa kwi-index.
Se benzisa amagama angundoqo ngokukodwa
Indlela kunye nalapho usebenzisa amagama angundoqo kubaluleke kakhulu. Iingcali zithi kufuneka ufake amagama angundoqo kwisihloko sakho, iintloko kunye nomhlathi wokuqala kwinqaku lakho. Ngaphezu koko, kufuneka usebenzise inamba enkulu yomsila omfutshane kunye nemigca emide yomsila kuwo wonke umxholo kunye neqela elifana nemibono kunye namazwi kunye. Kufuneka uhlale ukhumbule ukuba ukusebenzisa amanqaku amanqaku kwinqaku enye kunokukhokelela ku-Google nakwezinye iinjinjini ezikhangela indawo yakho njengegaxekile. Ngoko, into ekhethekileyo kukuba ukhethe iindidi zamagama angundoqo kunye neengongoma kwaye uzisebenzise ngokungahambisani nomxholo wakho. Unokusebenzisa amagama aqhelekileyo kunye namazwi xa ubhala isihloko. Kwaye, akufanele ulibale ukusebenzisa igama eliphambili kwisihloko sakho kunye nomhlathi wokuqala. Umgaqo oqinileyo kukuzalisekisa amagama angamagama amathathu ukuya kwane kwinqaku lakho.
Qinisekisa ukuba amanqaku afana neenqatshulwa eziphezulu
Kufuneka uqinisekise ukuba umxholo wakho wewebhu kunye namanqaku ahlangabezane nemigangatho yekhwalithi kumgangatho omkhulu. Kungenxa yokuba i-intanethi igxiliswe ngamawebhusayithi, kwaye ishishini lakho linokuphila kuphela xa unikeza ulwazi olufanelekileyo kwiindwendwe zakho. Banike ngezinto abafuna ukuzifunda baze banikeze i-angle ekhethekileyo okanye ukuthatha umxholo kumxholo wokubeka amaphepha akho ngaphandle kwamashishini.
Izibonakaliso ze-Searchmetrics zizinto ezimbalwa ezinokukunceda ukuphucula umgangatho wewebhusayithi yakho kwaye ufumane izikhundla eziphezulu kwiziphumo zejinjini. Kufuneka ukhumbule ukuba amagama, amagama angundoqo kunye namabakala kufuneka abe yinxalenye yawo onke amanqaku. Ngaphezulu, kufuneka uquke iividiyo ezimangalisayo kunye nemifanekiso ukwenza ukuba amanqaku akho akhangele ngakumbi abafundi.